I-sesamol （533-31-3 factory Umzi mveliso wabaxhasi bemveliso
I-Sesamol yicandelo le-phenolic yendalo, i-lignan ephambili, ekhutshwe kwi-sesame (sesame) kunye ne-sesame oyile; kwaye umxholo ophakathi wesame kwi-sesame ngowona uphezulu, yinto emhlophe yekristali eqinileyo, Ngaba isuselwa kwi-phenol. Iinyibilika kancinane emanzini, kodwa iphawuleka ngeoyile eninzi ..
I-Sesamol powder Ulwazi loLwazi
Ubunzima beMolar 138.12 g / mol
Melt Point 62 ku-65 ° C (144 ku-149 ° F; 335 ku-338 K)
I-Molecular Formula C7H6O3
Indawo yokubilisa I-21 ukuya kwi-127 ° C (250 ukuya kwi-261 ° F; 394 ukuya kwi-400 K) kwi-5
I-Sesamol yindawo yendalo ye-phenol efumaneka kwioyile yesame kunye neembewu zesesame ezigcadiweyo. I-Sesamol (iCAS 533-31-3) ithathwa njengeyona nto iphambili esebenzayo kunye neyona nto inamandla yeoyile yesesame edlala indima kwiziphumo zayo zonyango.
Isesame (Sesamum isibonakaliso) Kukutyiwa kweoyile ebalulekileyo kusapho lwePedaliaceae. Ithathwa njengenye yeoyile endala eyaziwayo esetyenziswa ngumntu kungekuphela nje ngexabiso lesondlo kodwa kunye nexabiso lonyango. Iindawo eziphambili zesame ezinikezela ngexabiso lonyango ngamagqabi kunye neoyile yembewu.
I-Sesamol 533-31-3 ikhompawundi ifumaneka kwimilinganiselo yokulandelela ngaphandle kwezinye i-lignin compounds yeesame yeoli, i-sesamin kunye ne-sesamolin. Le khompawundi yamanzi inyibilika ithathwa njenge-antioxidant eyomeleleyo.
Njani sesamol work?
I-Sesamol isebenza ngeendlela ezahlukileyo zokubonelela ngezibonelelo zayo zonyango ezinje nge-neuroprotection, antioxidant effects, anti-inflammatory, anti-tumor, anti-radiation kunye ne-radical scavenging effects.
Apha ngezantsi kukho ezinye iindlela apho i-sesamol isebenza ukufezekisa iziphumo ezichaziweyo;
I. Uthintela umonakalo we-DNA ngoxinzelelo lwe-oxidative
I-Sesamol inokuthintela umonakalo we-DNA ngoxinzelelo olubangelwa yimitha. Imitha ye-Ionizing ibangela ukonakala kwi-DNA yeselula ngokunciphisa i-chromosomal aberrations kunye ne-micronuclei kwiiseli ezandayo.
II. Ukukhuthaza umsebenzi wee-antioxidants ezibalulekileyo
I-Sesamol iyasebenza ngokulawula phezulu imisebenzi ye-enzyme ebalulekileyo ye-antioxidant enjenge-catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD), kunye ne-glutathione peroxidase (GPx), ehamba kunye namanqanaba okwanda kwe-glutathione (GSH). Ezi enzymes zidlala indima ebalulekileyo ekuthinteleni ukonakala kweselula zii-radicals.
III. Inhibits pro-apoptotic protein ke yongeza ukusebenza kweseli
Iiproteni ze-pro-apoptotic ziiprotein ezikhuthaza ukufa kweseli. Babandakanya i-p53, i-caspase-3, i-PARP, kunye nee-enzyme ezimbi. Ezi enzymes ziyabandakanyeka ekusweleni kweeseli okucwangcisiweyo kungoko kunokunciphisa ukusebenza kweseli.
I-Sesamol ibonakalisiwe ukukhuthaza ukusebenza kweeseli ngokuthintela umsebenzi wee-enzyme ze-pro-apoptotic.
IV. Ukuthintela i-lipid peroxidation
I-lipid peroxidation luhlobo lokuthotywa kwe-lipid eyenzeka ngenxa ye-oxidation. Oku kubangela ukwenziwa kweealdehydes ezisebenzayo, ezinje nge-malondialdehyde (MDA) kunye ne-4-hydroxynonenal (HNE) ebangela ukonakala kweseli. I-Sesamol ibonakalisiwe ekuthinteleni i-lipid peroxidation ke inika ukhuseleko kwiiseli.
V. Inqanda ukuveliswa kweeradical radical kubandakanya ihydroxyl radicals
Iiradicals zasimahla zizinto ezingazinzanga ezinxulunyaniswa nezifo kunye nokuguga. I-Hydroxyl radicals zezona zinto zinamandla zibangela ukugula.
I-Sesamol inciphisa ukuveliswa kwee-radicals zasimahla kubandakanya i-hydroxyl, α, α-diphenyl-β-picrylhydrazyl (I-DPPH), Kunye neABTS (2,2'-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid).
VI. Yandisa umsebenzi oqinisekileyo wokuqhekeza
Ukongeza ekuthinteleni ukuveliswa kweeradicals zasimahla, i-sesamol iyakwazi ukuphelisa ii-radicals zasimahla ezinjengehydroxyl, lipid peroxyl kunye ne tryptophanyl radicals.
VII. Ukuncitshiswa iiseli ukudumba
I-Sesamol inqanda iindlela zokubonisa ezichaphazelekayo kwimveliso yohlobo olusebenzayo ngaloo ndlela kunciphisa impendulo yokuvuvukala.
VIII. Iyanciphisa ii-cytokines ezivuthayo (TNFcy, IL-1β, kunye ne-IL-6)
I-nitric oxide, eveliswe yi-iNOS, ikhokelela ekuvukeleni kwemiphunga ngokuvuselela ii-cytokines ezivuthayo, ezifana ne-TNFcy, kunye nokuphucula impendulo yokuvuvukala. I-Sesamol inako ukuthintela ukukhutshwa kwe-TNFcy kunye ne-IL-1β.
IX. Ukubanjwa kokukhula kweseli kwizigaba ezahlukeneyo
I-Sesamol ibonakalisiwe ukuba ikhuthaza ukubanjwa kokukhula kweseli kwizigaba ezahlukeneyo zokukhula kweseli kubandakanya isigaba S kunye nesigaba se-G0 / G1. Iipropathi zomhlaza ezichasene ne-Sesamol ke ziyanceda, umzekelo, ukunciphisa ukukhula kwesifo somhlaza.
X. Ukwenza kusebenze indlela yecaspase
Ii-caspases zii-enzyme ezichaphazelekayo ekufeni kweseli okucwangcisiweyo. I-Sesamol ibonakalisiwe ukuba isebenze kwezi ndlela kungoko kukhokelela ekufeni komhlaza weseli.
XI. Inika i-apoptosis ngeendlela zangaphakathi kunye nezingaphandle
Iapoptosis yinkqubo yomzimba apho kwenzeka khona ukusweleka kweseli. Yinkqubo ebalulekileyo njengoko inceda umzimba ukuphelisa iiseli ezifileyo.
I-Sesamol induces apoptosis ngeendlela ezimbini ezahlukileyo, iindlela zangaphakathi kunye nezangaphandle.
XII. Ithintela i-mitochondrial autophagy
I-autophagy yeMitochondrial luhlobo oluthile lokuthotywa okunceda ukulahla i-mitochondria enesiphene.
Xa i-sesamol inqanda le nkqubo, emva koko i-apoptosis iyenziwa.
XIII. Iyanciphisa amanqanaba e-nitrite kunye ne-neutrophil
IiNitrites kunye nee-neutrophils zidlala indima kwimpendulo yokuvuvukala. Bayabandakanyeka ekukhutshweni kwe-nitric oxide edibanisa impendulo yokuvuvukala ngokunciphisa okanye ngenye indlela kuthintele ukudumba.
I-Sesamol idlala indima njenge-arhente yokulwa nokudumba ngokunciphisa amanqanaba e-nitrites kunye nee-neutrophils.
Yintoni i-sesamol isetyenziselwe?
I-Sesamol isetyenziselwa izibonelelo ezahlukeneyo zempilo kubandakanya;
i. Igazi elonyukayo.
Ioyile yeSesame isetyenziswa kunye namachiza oxinzelelo lwegazi njengamayeza aqinisekisiweyo okwehlisa uxinzelelo lwegazi.
Uphando olubanzi kwioyile yesesame lubonisa ukuba i-sesamol kunye ne-sesamin (ii-lignans ezikhoyo kwi-oyile yesesame) zidlala indima enkulu kulawulo lwegazi. Ukuthatha ioyile yesesame, ngakumbi ukupheka ngayo, iiveki ezintathu kunciphisa uxinzelelo lwegazi kubantu abanexinzelelo lwegazi ukuya kwesiqhelo.
Ngexesha lophando, iingcali zonyango ziye zabeka iqela lezigulana ezixinzelelekileyo kunyango (iProcardia, Nefedica kunye neAdelta) kangangeentsuku ezingama-21. Nangona kunciphile ukuncipha koxinzelelo lwegazi, bekungalunganga. Ioyile yeSesame yayisetyenziselwa ukubuyisela amayeza, kwaye izigulana zavavanywa emva kwexesha elifanayo. Isiphumo kukuba uxinzelelo lwegazi lwabo lwehla lwesiqhelo.
Oogqirha baphikise ukuba iziphumo zibenegalelo elikhulu kumanani aphezulu esesamol kunye nesesamin kwioyile yesame ephekiweyo. Ukuba kwafumaniseka ukuba kubandakanya ioyile yesesame ekutyeni kwabantu abanexinzelelo lwegazi kunokusebenza ngakumbi kunokubanyanzela.
Ezi ziphumo zixelwe kwiAmerican Heart Association kwintlanganiso yonyaka ye-Inter-American Society of Hypertension nguNjingalwazi Devarajan Sankar weYunivesithi yaseAnnamalai, eIndiya.
Uphando malunga nesesolol ekuvaleni kwamathumbu kubonisa ukuba inokuba ngcono kakhulu kune-aspirin. Kwisifundo malunga ne-ulcerative colitis, i-IBD (isifo sokuqaqamba kwamathumbu), esibangela ukonakala kwithishu ye-mucosal ngokudodobalisa inkqubo yokuvuvukala. Kwisifundo esichaphazela iigundane, i-sesamol yafunyanwa ukunciphisa imisebenzi ye-enzymes ebangela ukudumba.
Nangona i-aspirin yaziwa ngokubulala ngokufanelekileyo ukuphazamiseka kokudumba xa ityisiwe, inokubangela ukukhula kwezilonda ekusebenziseni ixesha elide. I-Aspirin ibangela ukwenzakala kwe-gastroduedonal ngokunxiba iiseli.
Olunye uphando lubonisa ukuba i-nasogastric intubation ye-sesamol kwizigulana ezinesifo esincinci samathumbu kunye nokunyamekelwa okuqhelekileyo kunciphisa amathuba okuba kwenziwe utyando.
iii. Isifo sentliziyo.
Imingcipheko ebangelwa zizifo zentliziyo inesabelo esikhulu ekufeni kunye nokugula. Zingakhokelela kuxinzelelo lwe-oxidative kwaye ukuba ayinyangeki iye iba mandundu ukuya kunyuka kwimveliso pf ye-oksijini yeentlobo esebenzayo, kubandakanya nenkqubo yokhuselo ye-antioxidant.
I-Sesamol isebenzisa iipropathi zayo ezichasene ne-oxidative ukuthintela izifo ezinobungozi ezinjenge-hypercholesterolemia, hypertriglyceridemia, uxinzelelo oluphezulu lwe-lipoprotein cholesterol kunye ne-lipoprotein ephezulu.
Uphando olongezelelweyo luqukumbele ukuba i-sesamol ine-membrane uzinzo kunye neziphumo zokunciphisa i-lipid. Ngaphaya koko, ikhusela i-myocardium ngokuchasene ne-cardiomyopathy ebangelwa yi-DOX.
IV. Ukukhula komntwana.
I-Sesamol isetyenziswa kuluhlu olubanzi lwenkalo yokukhula komntwana. Kwizifundo ezahlukeneyo, i-sesamol esetyenziselwa ukunciphisa i-ADHD kubantwana abaphazamiseke ngengqondo kwathiwa iyasebenza kancinci ukuba isetyenziswe kwisixa esincinci. Ukusilela kwe-DHA kuqheleke kakhulu kubantwana abane-ADHD.
Ngaphezulu kweshumi lophando lubonisa izibonelelo ezilungileyo kwiimpawu ze-ADHA kubandakanya ukufunda amagama, ukungxamiseka, ukufunda okubonwayo, inkumbulo yokusebenza, kunye noxinzelelo.
Iintsana zithambisiwe kwioyile yesesame kwiiveki ezine ezirekhodishe ukukhula okuphucukileyo kunye nokusebenza komzimba.
I-Sesamol isebenza ngokufanelekileyo njengesongezelelo kumayeza eswekile ukunciphisa amanqanaba eswekile yegazi ngokukhawuleza. Ukuthatha izongezo ze-sesamol okanye endaweni yokutshintsha usiya kwi-oyile yokutya ngelixa ichiza leswekile linika isivuno esingcono somsebenzi.
Kuphando oluninzi, uninzi lubandakanya izigulana zohlobo lwesibini lweswekile, i-sesamol ibonise iziphumo ezinkulu. Olunye lwezifundo lwalubandakanya amaqela amathathu, ngalinye linengxaki yesifo seswekile sesi-2. Elinye iqela laliphantsi kwesesamol kuphela, elinye iyeza lonyango lwe-glibenclamide (Glyburide), kunye nelokugqibela kuzo zombini i-sesamol kunye neGlyburide kangangeeveki ezisi-2.
I-Sesamol ixelwe ukuba inefuthe le-synergetic kunye ne-glyburide, njengoko unyango oludibeneyo lwehlise i-hemoglobin A1c kunye namanqanaba eswekile yegazi kakhulu, kwaye ingcono kakhulu kunenye yonyango olunye.
Hyperlipidemia. Abaphandi baxela ukuba i-sesamol esetyenziselwa ukutshisa i-cholesterol kunye nezinye i-lipids egazini inike iziphumo ezilungileyo. Kuvavanyo lweemodeli, ukusebenza kwe-sesamol kwavavanywa kwi-hyperlipidemia yokutya okunamafutha aphezulu, i-hyperlipidemia engapheliyo, i-hypercholesterolemia, kunye ne-hyperlipidemia ebukhali.
Ukuhla kwenqanaba le-triacylglycerol njengoko iziphumo zicebisile ukuba i-sesamol inciphise kakhulu ukufunxwa kwe-triacylglycerol. I-Sesamol ikwasetyenziselwa ukuguqula amanqanaba aphezulu e-cholesterol.
Uphononongo lubonisa ukuba isongezo sesamol sonyusa ukuphuma kwe-cholesterol kunye nokunciphisa ukufunxeka kwayo.
VI. Isifo seMetabolic kunye nokutyeba kakhulu.
I-Sesamol ixelwe ukuba inezinto ezahlukeneyo zebhayiloji kubandakanya ukubuyisa ukutyeba kunye nokuphazamiseka komzimba. Kuxelwe ukuba kunokwenzeka kuthintele ukutyeba kakhulu.
Uphando oluqhutyelwe ukuvavanya indlela esebenzayo ngayo i-sesamol ekutyebeni kakhulu, kwafumaniseka ukuba inokulawula i-hepatic lipid metabolism. Oku kuphucule ukunganyangeki kwe-insulin kunye nokunyusa ukunciphisa umzimba. Ukutyeba kakhulu kunye nokuphazamiseka okunxulumene nemetabolic kunxulumene ngokubanzi nokuqokelelana kwe-lipid emzimbeni. Ukwehla koqokelelo kuthetha ukuguqula imeko yokutyeba kakhulu.
Ukusetyenziswa kweSesamol kwandisa i-lipolysis, i-fatty acid oxidation kunye nokunciphisa izinga le-lipogenesis ye-hepatic, izinto ezibalulekileyo ekunciphiseni ukuqokelela kwe-lipid. Le misebenzi (okt ukuthathwa kwe-lipid, synthesis kunye ne-catabolism) ziphakathi kwezinto ezininzi ezenzeka esibindini.
Abantu abasebenzisa i-sesamol baxele iiprofayili ezingcono ze-hepatic kunye ne-serum lipids, kunye nokuphucula uvakalelo lwe-insulin.
vii. I-rheumatoid arthritis, iOsteoarthritis, kunye ne-osteoporosis.
Nangona i-rheumatoid arthritis, isifo esibuhlungu nesingapheliyo sokuzimela, ineendlela ezininzi zonyango, ukusetyenziswa kwazo ixesha elide kuhlala kune-hepatotoxic. I-Sesamol inokuba luncedo kwindalo. Izifundo eziphanda ngokufanayo zichaze ukuba i-sesamol ineziphumo ezingcono zokulwa ne-arthritic kunye ne-anti-inflammatory ezenze ngcono iziphumo zesifo samathambo.
I-Osteoarthritis yeyona nto inegalelo kwintlungu edibeneyo, eqikelelwa ukuba ichaphazele malunga ne-15% yabemi behlabathi. Uxinzelelo lwe-oxidative, nangona kunjalo, lunendima enkulu kukungasebenzi kakuhle kwemisipha. Uphando malunga nefuthe le-sesamol kwi-osteoarthritis enxulumene nentlungu edibeneyo ibonakalise ukuba ukuthatha isongezo sesamol iveki kungathoba iintlungu. Oku kubangelwe yipropathi yoxinzelelo lwe-anti-oxidative yesesamol.
Izazinzulu ziye zagqiba kwelokuba inkqubo efanayo ne-postmenopausal osteoporosis ihambile ukuba ibangele i-ovariectomy, apho kukho ilahleko eqhubekayo kubunzima bamathambo kunye namandla. Kufunyenwe ke ukuba ukulahleka kwethambo kubangelwa kakhulu yi-estrogen. I-Sesamol ixelwe ukuba ibophele kwii-estrogen receptors kwaye ikhuphe ukubhalwa kohlobo lwe-estrogen. Iziphumo eziluncedo zikhuthaza ukomelela kwethambo ngokuvelisa iiprotheyini zematriki zethambo.
viii. Isifo i-Alzheimer, unxunguphalo kunye nokubetha.
Isifo i-Alzheimer sisifo esiqhubela phambili sokuphazamiseka kwengqondo esibangela ukonakala kweeseli zobuchopho. Ihlala ikususa ukuzimela kwengqondo kwabantu abachaphazelekayo. Iziphumo ze-neuroprotective ze-sesamol zixeliwe ziyathembisa. Uphononongo lusetelwe ukucacisa amandla onyango lwe-sesamol kwisifo sokuwa, imeko edityaniswe ngokubanzi kukuphazamiseka kwengqondo kunye noxinzelelo lwe-oxidative. Uphando luqukumbele ukuba i-sesamol ikhuphe iziphumo zokuzonwabisa ngokuchasene nokubetha, ukuphazamiseka kwengqondo, ukuxhuzula, kunye noxinzelelo lwe-oxidative. Ukusetyenziswa kweSesamol kunyango lwe-antiepileptic kunokuba luncedo.
[a]. I-Sesamol Anti-oxidant ziphumo
Uxinzelelo lwe-oxidative lwenzeka xa kukho ukungalingani kwimveliso yeeradicals simahla kunye nee-antioxidants emzimbeni. Oku kuhlala kukhokelela ekonakaleni kweseli kunye noxinzelelo lwe-oxidative oluthathwa njengeyona nto ingunobangela weengxaki ezininzi.
Uxinzelelo lwe-oxidative luyinkqubo yendalo yomzimba ekhokelela ekwaluphaleni.
Ii-antioxidants kwelinye icala zizinto ezithintela ukonakala kweeseli ngenxa yeeradicals zasimahla. Zihlala zibizwa ngokuba zii-radicals simahla.
I-Sesamol yeyona nto inamandla kwaye inamandla ye-antioxidant yeoyile yesesame. Isebenza ngeendlela ezahlukeneyo zokuhambisa iziphumo ze-antioxidant. Ezi ndlela zokusebenza zibandakanya ukonyusa imisetyenzana ebalulekileyo ye-antioxidant, ukukhuselwa kwe-DNA kumonakalo wemitha, ukutshabalalisa iiradicals zasimahla, ukuthintela i-lipid peroxidation, kunye nokukhuselwa kwimitha ye-ultraviolet.
Uphononongo lokuvavanya umsebenzi we-radioprotective we-sesamol ngokuchasene ne-gamma irradiation kwi-DNA. Umonakalo we-DNA ubangelwa kukwazisa ikhefu elinye okanye elinemicu emibini ngokuvelisa iintlobo zeoksijini ezisebenzayo.
I-Sesamol yafunyanwa inqanda ikhefu elinye le-DNA. Ikwanciphisile amanqanaba ee-radicals zasimahla ngakumbi i-hydroxyl, i-DPPH, kunye ne-ABTS radicals, ezo zonke zazinxulunyaniswa nokwaphulwa okukodwa okanye kabini.
[b]. I-Sesamol Ulwaphulo-mthetho iinzuzo
Ukuvuvukala yinkqubo yendalo yomzimba eyenziwa ngumzimba ukulwa neearhente zangaphandle ezinje ngeentsholongwane, ukungunda, okanye ukwenzakala. Nangona kunjalo, ukudumba okungapheliyo kuyingozi emzimbeni njengoko kukhokelela kwiziphazamiso ezahlukeneyo.
Izinto ezichasene nokuvuvukala zinceda ukukhusela umzimba kumonakalo ngokulwa nokudumba. I-Sesamol isebenza ngeendlela ezahlukeneyo zokubonelela ngeziphumo ezichasayo. Ezi ndlela zentshukumo zibandakanya ukuthintela iiseli ezitshisayo, ukunciphisa imveliso ye-nitrites kunye nokucinezela umsebenzi kunye neendlela zokudumba.
Kuphononongo lweempuku ezine-lipopolysaccharide LPS-eyenzakeleyo yokulimala kwemiphunga, i-sesamol yafunyanwa icinezela ii-cytokines ezichasayo kunye nokuthintela imveliso ye-nitric oxide kunye ne-prostaglandin E2 (PGE2). I-Sesamol ikwafunyenwe ukuba ilawule i-adenosine monophosphate-activated protein kinase (AMPK). Oku kunceda ukucinezela ukudumba kunye nokunciphisa ukonakala kweseli.
[c]. I-Sesamol yomhlaza ziphumo
I-Sesamol ineepropathi ezinceda ukulwa neeseli ezinomhlaza kubandakanya nomsebenzi wokuchasana nokwanda ngeendlela ezahlukeneyo ezinje ngokunqanda ukubakho kweembrane, ukubamba ukukhula kweseli kumanqanaba ahlukeneyo kunye nokunciphisa i-apoptosis.
Kwisifundo esichaphazela i-DLD-1 yomhlaza womhlaza weseli yomgca weseli, i-sesamol yayisetyenziselwa idosi ye-12.5-100 μM. Kwafunyaniswa ukuba umsebenzi okhutshelweyo we-COX-2 wehle ngama-50%.
Kwesinye isifundo, i-sesamol esetyenziswe kumthamo omkhulu we-0.5-10 mM yafunyanwa ukuba ibangele i-apoptosis kwi-HCT116 ngokwandisa i-oksijini esebenzayo ye-oksijini (i-O2 • -) ngendlela exhomekeke kwidosi. Oku kukhokelele ekusebenzeni kwendlela yokubonisa ye-JNK ekhuthaza umonakalo we-mitochondrial. Oku kukhokelela ekukhutshweni kwecytochrome c ethi isebenze ngokungagungqiyo ngenxa yoko inciphisa iapoptosis.
[d]. Iilwandle Ulwaphulo-mutagenic ziphumo
I-Mutagenicity ibhekisa kubuchule be-arhente (mutagen) yokwenza utshintsho. Utshintsho olutshintsho kwimathiriyeli yemfuza lunokukhokelela kumonakalo weseli kwaye kuthathelwa ingqalelo ukuba kunokubangela izifo ezithile ezinje ngomhlaza.
I-Sesamol ibonakalisiwe inezinto ezinamandla ezichasene ne-mutagenic. Izibonelelo zayo ezichasene ne-mutagenic zinxulunyaniswa nomsebenzi we-antioxidant kwaye nangakumbi ke kwisakhono sokufumana ii-radicals zasimahla.
Kwisifundo, i-mutagenicity yanyanzeliswa kukuveliswa kwee-oxygen radicals yi-tert-butylhydroperoxide (t-BOOH) okanye i-hydrogen peroxide (H2O2). I-Sesamol yafunyanwa inamandla okulwa ne-anti-mutagenic kwi-Ames tester strains TA100 kunye ne-TA102. Uxinzelelo lwe-TA102 lwaziwa ukuba lubuthathaka kakhulu kwiindidi zeoksijini ezisebenzayo. I-Sesamol ikwabonakalisiwe inhibit the mutagenicity of sodium azide (Na-azide) in TA100 tester strain.
[e]. I-Sesamol ukhuselo ukusuka kwimitha
Imitha ibhekisa kumandla ahamba ngendlela yamaza okanye amasuntswana. Imitha yelanga inokwenzeka kakhulu kwindalo esingqongileyo. Nangona kunjalo, radiation radiation inokuba yingozi ukuba ishiywe ingalawulwa. Ukuvezwa nje kancinci kwimitha kungakhokelela kwizifo ezibi ezifana nokugula ngemitha kunye nokutshiswa lilanga.
Ukongezwa okuthe kratya kwimitha kubangela ukuphazamiseka okunzulu kubandakanya umhlaza kunye nesifo sentliziyo.
Kwisifundo seempuku ezinomonakalo we-DNA owenziwe ngemitha, i-sesamol yavavanywa ngomsebenzi wayo wokukhusela ngokuchasene nemitha. Ukunyanga kwangaphambili kweempuku nge-sesamol kukhokelele kukhuseleko ngokuchasene nomonakalo we-DNA obangelwa yimitha.
[f]. Ukuthathwa kwentliziyo
I-Sesamol kuye kwaxelwa ukuba inikezela ukhuseleko kwintliziyo kukonzakala.
Kwisifundo sokuvavanya amandla okhuselo e-sesamol ngokuchasene nokwenzakala kwe-myocardial, i-sesamol prereatment yenziwa kwi (50 mg / kg) yenziwa kangangeentsuku ezisi-7 ngaphambi kwexesha lotyando.
Olu pho nonongo lufumene ukuba i-sesamol yanciphisa kakhulu ubukhulu be-infarct, isebenzisa izibonakaliso zentliziyo, inqanda i-lipid peroxidation, ukungena kwe-neutrophil kunye nokuphakamisa i-antioxidants level. Kwaxelwa ukuba i-sesamol powder ikhokelela ekunciphiseni iizakhi zofuzo ezivuthayo, iiprotheyini ze-Caspase-3 apoptotic , kunye nokwandiswa komsebenzi weprotein ye-anti-apoptotic Bcl-2.
[g]. I-Sesamol Iiradicals zasimahla zigqiba
Iiradicals zasimahla ziiathom ezingazinzanga ezifumana ngokulula ii-electron ezivela kwezinye iiathom. Zombini ziluncedo kwaye zinetyhefu kuxhomekeke kugxino lwazo. Kumanqanaba asezantsi ii-radicals zasimahla zidlala indima kwimpendulo yomzimba yokuzikhusela, nangona kunjalo, xa uxinzelelo lwabo luphezulu kakhulu baba yingozi. Ii-radicals zasimahla zikhulisa uxinzelelo lwe-oxidative ezinokuthi zonakalise iiseli kwaye zinokubangela ukuphazamiseka okungapheliyo kunye nokwehla okufana nomhlaza, izifo zentliziyo, kunye nesifo samathambo, cataract kunye nezifo ze-neurodegenerative.
Imizimba yethu iphikisana nefuthe loxinzelelo lwe-oxidative ngokuvelisa ii-antioxidants nangona zingenakwanela kwaye zifuna ukuxhaswa ngokutya okanye izongezo.
I-Sesamol inayo 'amandla okuthintela ukwenziwa kweeradicals zasimahla kunye nokuhlutha iiradicals zasimahla.
Kwisifundo esichaphazela ulusu lolusu lwesikhumba sabantu abadala (i-HDFa) esiveliswe i-UVB, isamol prereatment yavavanywa ngokuchasene ne-cytotoxicity, inqanaba le-intracellular esebenzayo ye-oxygen (ROS), lipid peroxidation, antioxidant status, kunye ne-oxidative DNA umonakalo. I-Sesamol yafunyanwa ukunciphisa i-lipid peroxidation, i-cytotoxicity, i-ROS ye-intracellular, kunye nomonakalo we-DNA kwi-cell dermal cell. Oku kwabangelwa kukukwazi ukuxhasa isesamol ukuxhasa iROS.
Olu phononongo lunye luchaze ukwanda kwe-enzymatic kunye ne-non-enzymatic activity enegalelo ekusebenzeni ngcono kwe-antioxidant.
[h]. Yehlisa i-cholesterol egazini
I-cholesterol yegazi yinto efana ne-fat, efana ne-wax emzimbeni wakho. Ifunwa ngumzimba ukwakha iiseli ezisempilweni kodwa ngamanani afanelekileyo. I-cholesterol ithuthwa kwiindidi ezimbini zeepoprotein, ubungqingqwa obuphantsi kunye noxinano oluphezulu. Yiyo ke ezisa iintlobo ezimbini ze-cholesterol, i-low-density lipoprotein (LDL) cholesterol, kunye ne-high-density lipoprotein (HDL) cholesterol.
I-LDL ihlala ibizwa ngokuba yi-cholesterol embi kuba kumanqanaba aphezulu e-LDL wandise umngcipheko wokuphazamiseka kwemithambo kunye nezinye izifo.
I-Sesamol inokunciphisa inqanaba le-cholesterol kunye nenqanaba le-triacylglycerol emzimbeni.
Kuvavanyo lokunyamezelana kwamafutha, sesamol (100 no-200 mg / kg) ifunyenwe ubukhulu becala (P <0.05) inciphisa ukufunxwa kwe-triacylglycerol kungoko yehlisa inqanaba le-triacylglycerol emzimbeni. I-Triacylglycerol lelona candelo liphambili lamafutha agcinwe kwizicubu ze-adipose.
Kuphononongo lweempuku zaseSwitzerland i-albino ene-hyperlipidemia, isongezo se-sesamol kwi-50 kunye ne-100 mg / kg kwathiwa yehle amanqanaba e-cholesterol kunye ne-triacylglycerol.
Umsebenzi we-sesamol ukunciphisa i-cholesterol kunye namanqanaba e-triacylglycerol kubangelwa kukukwazi ukunciphisa ukufunxwa kunye nokunyusa ukuphuma kwe-cholesterol.
[i]. I-Sesamol izisa ulusu
Ulusu lomntu luyinxalenye ebalulekileyo yenkqubo yamanani, umsebenzi wayo ophambili kukukhusela amalungu omzimba.
I-Sesamol izuza ulusu ngeendlela ezahlukeneyo ngenxa yeempawu zalo ezinamandla kubandakanya i-antioxidant, kunye nomsebenzi wokuchasana nokudumba. I-Sesamol izuza ulusu ngoku
· Ukukhusela ulusu kwimitha ye-ultraviolet (UV)
Ukuvezwa ixesha elide kukukhanya kwelanga kunokukhokelela kwisizukulwana esingaqhelekanga sokuphakama kweentlobo zeoksijini (ROS), ezinokubangela ukonakala kolusu njengokuhla kwecollagen kwidermis kunye ne-hyperplasia ye-epidermis.
I-Sesamol iyakwazi ukukhusela i-radicals yasimahla eyenzeka ngenxa yokukhanya elangeni ixesha elide ngaloo ndlela ikhusela ulusu kumonakalo we-DNA. Inika isambatho sokukhusela esinceda ukukhusela ulusu ukuba lungonakaliswa yimitha ye-UV.
Izifundo zixela ukuba i-sesamol inokunciphisa i-cytotoxicity ebangelwa yi-UVB. Kukwabikwa ukuba kuthintela i-melanin biosynthesis ngokunciphisa ukubonakaliswa kwe-tyrosinase, MITF, TRP-1, TRP-2, kunye ne-MC1R kwiiseli ze-melan-a.
Olunye uphononongo lufumanise ukuba i-sesamol inokuthintela ukuhlanganiswa kwe-melanin ngokuphembelela i-CAMP / protein kinase A (cAMP / PKA), protein kinase B (AKT) / glycogen synthase kinase 3 beta (GSK3β) / CREB, TRP-1, kunye neMITF kwi-B16F10 iiseli
· Nceda ukugcina isikhumba esikhanyayo
I-Sesamol yaziwa ngokuba yi-antioxidant eyomeleleyo. Ingena nzulu kulusu ukondla ulusu. Oku kunceda ekufumaneni isikhumba esikhanyayo.
· Ukuphelisa amabala
Amabala yimeko apho ulusu luvaliwe ngeoyile, ukungcola kunye nezinye izinto ezinobungozi.
I-Sesamol ineepropathi zokulwa neentsholongwane ezenza ukuba zisuse ii-microorganisms ke ngenxa yoko ufumana ulusu ngaphandle kwamabala.
· Inikezela ngeziphumo ezichasene nokwaluphala
Ukuguga yinkqubo yokumodareyitha eqhubekayo yobomi. Nangona kunjalo ukwaluphala ngaphambi kwexesha kunokubakho ngenxa yezinto ezininzi ezinjengokubonakaliswa okude kwimitha ye-UV, uxinzelelo lwe-oxidative phakathi kwabanye.
I-Sesamol ibonelela ngomsebenzi onamandla we-antioxidant othintela ulusu kunye nomzimba kwi-cellation oxidation kunye nokuphucula ukuvuselelwa kwesikhumba.
I-Sesamol ikwachazwe ukuthintela ukwenzeka kwemigca, iipore kunye nemibimbi.
[j]. Isesamol izibonelelo zeenwele
Ukusetyenziswa kwesihloko seoyile yesesame kukondla i-scalp, iifollic hair, kunye ne-shafts. Oku kukhuthaza ukukhula kweenwele okunempilo. Ikwanceda ekuphiliseni nasiphi na isikhumba esonakeleyo ngamachiza xa kunyangwa iinwele okanye kudayiwe.
Ukuhonjiswa kwangaphambi kwexesha kweenwele kunokwenzeka ngenxa yokuncipha komzimba ukwenza i-melanin eyoneleyo, kunye nezinye izinto ezinje ngoxinzelelo lwe-oxidative, indlela yokuphila yokuguqula ufuzo kubandakanya ukutya kunye nokusetyenziswa kweziyobisi.
Isongezo seSesamol singqine ukuba siyakwazi ukugcina umbala weenwele kunye nokwenza mnyama zibe sele zingwevu.
Ngaphandle koko, i-sesamol inokunceda ekupheliseni inkwethu. I-Dandruff inokwenzeka ngenxa yolusu olomileyo, uguquko kwimveliso yeenwele, kunye nokukhula komngundo esikhumbeni phakathi kwezinye izinto. I-Sesamol inceda ukondla ulusu ngaloo ndlela igcine isikhumba esisempilweni ke oko kuthintela ukwenzeka kwenkwethu. Umsebenzi we-antibacterial uqinisekisa ukuba i-scalp ayinazo iintsholongwane ezibangela inkwethu.
Iindlela ezintathu zokwenziwa kwesesamole
①. Ukukhutshwa kwioyile yeSesame
I-Sesamol synthesis kwioyile yeSesame yeyona ndlela ilula kwezi ndlela zintathu. Nangona kunjalo, kubiza kakhulu. Ke le ndlela ayifanelekanga kwimveliso yoshishino, ngakumbi ngenxa yeendleko eziphezulu zemveliso.
②. Synthesis synthesis evela kwi-piperamine
Nangona kulungile uqoqosho kwizinga elikhulu le-Sesamol Production, yonke indlela ye-sesamol synthesis evela kwi-piperamine isebenza kwimveliso emincinci xa kuqeshwa inkqubo ye-hydrolysis kunye ne-hydrolysis. Kwimeko enjalo, ukwakhiwa kwe-pigment njengesiphumo sokudibanisa kunye nokuphendula kwicala akunakuphepheka.
③. Indlela yokuma eyenziweyo evela kwijasmonaldehyde
Indlela yento eyenziweyo evela kwi-jasmonaldehyde yeyona nkqubo isetyenzisiweyo yasentsame phenol ukuya kuthi ga ngoku ngeenjongo zorhwebo ezichaphazelekayo. Inkqubo ibandakanya i-oxidation kunye ne-hydrolysis kwaye ngenxa yaloo nto, umphumo we-sesame phenol ekumgangatho ophezulu kunye nombala omkhulu.
Inkqubo isebenzisa i-oxidant esebenzayo kunye netekhnoloji esebenzayo yokutsala, eyenza ukwahlulwa ngokukhawuleza kwemveliso kwindawo ekukhutshelwa kuyo. Oku kunciphisa ukubakho kwempendulo esecaleni kakhulu. Akumangalisi ukuba imveliso yokugqibela (i-crystal emhlophe emhlophe) ikumgangatho ophezulu ngokwembala kwaye isamol mninzi.
Kuyiwaphi thenga isesamol
I-Sesamol powder iyafumaneka kwi-Intanethi ngokwahlukeneyo Abavelisi besesamol. Uninzi lwabasebenzisi besesamol bathenga ngeendlela ezahlukeneyo kwiwebhusayithi, ezinye zenzelwe ukuthengisa okanye ukuthengisa.
Qinisekisa ukuba semthethweni kwayo yonke into umenzi wesesamol usebenzisa imithetho yelizwe echaziweyo ngaphambi kokuthenga.
UJoo Yeon Kim, uDong Seong Choi kunye noMun Yhung Jung "Umsebenzi weAntiphoto-oxidative weSesamol eMethylene Blue- kunye neChlorophyll-eQinisekisiweyo yePhoto-oxidation yeoyile" J. Agric. Ukutya Chem., 51 (11), 3460 -3465, 2003.
Kumar, Nitesh & Mudgal, Jayesh & Parihar, Vipan & Nayak, Pawan & Nampurath, Gopalan Kutty & Rao, Chamallamudi. (2013). Unyango lweSesamol lwehlisa iPlasma Cholesterol kunye nenqanaba leTriacylglycerol kwiiMouse Models zeAcute kunye neHyperlipidemia engapheliyo. Iipilisi. 48. 633-638. 10.1007 / s11745-013-3778-2.
IMajdalawieh, AF, kunye neMansour, ZR (2019). I-Sesamol, ilignan enkulu kwiimbewu zesesame (Isalumumum): iipropathi ezichasene nomhlaza kunye neendlela zokwenza. Ijenali yaseYurophu ye-Pharmacology, 855, 75-89.INGXELO: 10.1016 / j.ejphar.2019.05.008.
Ohsawa, Toshiko. “I-Sesamol kunye ne-sesamol njenge-antioxidants.” Umzi mveliso omtsha wokutya (1991), 33 (6), 1-5.
I-Sesamol efakwe ku-2010-01-14 kuMatshini weWayback eChemicalland21.com
UWynn, uJames P .; UKendrick, uAndrew; Ukuqinisekisa, uColin. "I-Sesamol njenge-inhibitor yokukhula kunye ne-lipid metabolism kwi-Mucor circinelloides ngokusebenzisa isenzo sayo kwi-enzyme ye-malic." Iipilisi (1997), 32 (6), 605-610.